Zvidzidzo gumi nezviviri zvinoshandiswa kubva kune Zvakanyanya Kuva Muridzi kuMarket | Martech Zone
Kuitwa kwemaitiro makuru ekushambadzira iri chiyero chemazhinji akasiyana. Pasina kuronga kwakaringana uye nzira refu-refu, kushambadzira kwekushambadzira kuedza kunogona kukanganisa mhando. Asi kunonoka uye kwakanyanya kutsoropodza kushambadzira kuedza kunogona kumisa imwe. Imwe nzvimbo iri pakati ibudiriro, inoda kuenderera mberi ichitarisa pazvinangwa zvenguva refu zvesangano, asi iine zviwanikwa zvinokwanisa kuchinjisa mafambiro uye zano munguva chaiyo semhedzisiro inoguma.
Ndichangopedza kuverenga Kunyanyisa Kuve Muridzi: Maitiro eUS Navy SEALs Anotungamira uye Anokunda. Iko kuverenga kukuru kwezvidzidzo zviri munhandare yehondo uye nemashandisiro azvingaitwa kune ese bhizinesi kuedza. SaNavy Veteran, ndinofunga handina rusaruro mukutenda kwangu bhuku iri. Asi semuridzi webhizinesi, handina kukwanisa kubvumirana zvakanyanya nezvidzidzo zvandakadzidza uye mashandisiro azvinoita kubhizinesi rangu.
Mashoko eimwe peji akasvetuka kubva pabepa pandakaaverenga. Nekuremekedza vanyori vebhuku iri, ndiri kuzogadzirisa zvinhu zvakakosha zvehutungamiriri uye nekuzvishandisa kuchirongwa cheshambadziro chizere:
zvinangwa - ongorora mamishini ekushambadzira, unzwisise kuti anokanganisa sei kambani yako, vanhu vako, uye nekuedza kwako. Ziva uye utaure yako yekushambadzira mishoni uye yekupedzisira nyika kune yega mushandirapamwe.
Resources - tarisa bhajeti, vashandi, midziyo, maturusi, vanachipangamazano, uye nguva inowanikwa pamushandirapamwe wega wega.
Kuronga - kudzora danho rekuronga, kupa masimba nyanzvi dzese svikiro kana zano rekuongorora zvingaite zviito.
sarudzo - sarudza yakanakisa mishandirapamwe, uchizendamira pakusarudza iyo nyore mishandirapamwe uye kutarisisa zviwanikwa kwavanenge vaine simba rakakura.
Simba - nyanzvi dzekushambadzira kuvandudza hurongwa hwechiteshi chakasarudzwa uye zano ravane hunyanzvi uye ruzivo mariri.
Contingencies - Ronga zvingangoitika zvinoitika kuburikidza nechikamu chega chega chemushandirapamwe. Ungawedzera sei mhedzisiro sezvo mushandirapamwe uchiitwa? Ndeipi nzira inoitika kana zvinhu zvikashata?
ngozi - dzora njodzi dzinogona kudzorwa zvakanyanya sezvazvinogona. Pane here marongero, edhisheni, uye mvumo nzira dzinogona kushandiswa kuona kutevedza?
Govera - gonesa nyanzvi dzako kuti dziite zvikamu zvehurongwa iwe uchinge wakamira kumashure utore hutungamiri pane hwese hurongwa. Iri ibasa rako kuona kubonderana kunodzivirirwa, uye zviwanikwa zvinoiswa kuti uve nechokwadi chekubudirira kwehumishinari.
tarisisa - ramba uchitarisa uye uchibvunza chirongwa chakanangana neruzivo rwuchiri kubuda kuti uone kuti runoramba ruchiita.
shoma - kutaurirana chirongwa kune vese vatori vechikamu uye kutsigira zvinhu, uchisimbisa hutungamiriri chinangwa.
Bvunza - bvunza mibvunzo uye pinda mukukurukurirana nekudyidzana nemunhu wese kuti uone kuti vanonzwisisa zvese zvikamu zvemushandirapamwe wega wega uye nemabatiro avanoita neumwe.
Pfupi - Ongorora zvidzidzo zvadzidzwa uye zviite mukuronga mune ramangwana mushure mekuitwa kwemushandirapamwe.
Sezvineiwo zvakakwana, zvaisada kuti ndichinje mazwi akawandisa kuti ndishandise zvidzidzo zvakafanana zvakadzidzwa kunhandare yehondo kune avo vari mumushandirapamwe wekushambadzira. Kuburikidza nematanho ese eichi chiitiko chinotungamira kumushandirapamwe uye kubvunzurudza mushure mawo, tarisiro inoiswa pakushandisa zviwanikwa nenzira kwayo, kuishandisa nenzira kwayo, uyezve kutevedzera kushandisa izvo zvidzidzo zvadzidzwa.
Kune zvakare hutongi husingaonekwe pano husingafanire kuenda husingaonekwe. Dai iyi yaive nzira yawakabata dhipatimendi rekushambadzira uye bhajeti, mushandirapamwe wega wega waizoenderana nezvinangwa zvesangano. Isu tinoshamiswa nebasa rakawanda iro isu tinokumbirwa kuti tiite nevatengi vedu iro risingadaro Fanana ine kukosha chaiko kusangano. Kana isiri kubatsira yako yepazasi mutsara - mira kuzviita!
Tags: kunyanyisa kuve muridziJocko WillinkLeif Babinmabhuku ekushambadzirazvisimbiso zve navykuverengainoverengazvisimbiso
Wipster: Vhidhiyo Kuongorora uye Kubvumidza Platform